‘प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छैन, देश बनाउने भोक छ’
December 6, 2017 latestnewsLeaveaComment on ‘प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छैन, देश बनाउने भोक छ’
काठमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रहर नभएको तर देश बनाउने भोक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा घरदैलोको अन्तिम दिन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘ममा प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छैन, देश बनाउने भोक छ । देश बनाउनका लागि को योग्य छन्, को सक्षम छन्, कसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गठवन्धनले तय गर्ने हो । त्यसैका लागि हुरुक्क, हिरिक्क हुनुपर्ने, मरिहत्ते गर्ने स्वाभाव छैन मेरो ।’
चुनावी प्रचारको मैझारो हुनै लागेका बेलामा हामीले एमाले नेता नेपाललाई काठमाडौं २ मा उनको प्रचार अभियान कसरी चलेको छ भन्नेबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौंः
घरदैलो अभियान कहाँ पुग्यो ?
लगभग धेरै सकियो । ९० प्रतिशत मतदाताकहाँ पुगिसकेँ होला ।
कत्तिको थकित हुनुहुन्छ ?
थकित त थोरै भइहालियो । खुट्टामा सानो समस्या भएकाले अलिकति हिँड्न गाह्रो भएको छ । तैपनि दिनदिनै आठ घन्टा, नौ घन्टा हिँडिरहेको छु ।
पहिले आफैंले ‘तिरस्कार’ गरेर छाडेको क्षेत्रमा फेरि फर्किनुभयो भनेर तपाईंका विपक्षीहरुले आलोचना गर्दैछन् नि ?
यो क्षेत्र मैले कहिल्यै छोडेको छैन । कागजीरुपमा छोड्नु एउटा कुरा हो । तर, यो निर्वाचन क्षेत्रलाई मैले ०६४ सालदेखि कहिले पनि छोडेको छैन । यहाँका जनताका प्रत्येक विकास निर्माणका माग, चाहना, निजी समस्या, दुःख-सुखमा म अनवरत रुपमा लागेको छु । कहिले हारे पनि, कहिले कागजीरुपमा अर्को ठाउँको सदस्यता कायम राखे पनि यहाँको जनप्रतिनिधिका रुपमा नै मैले पनि भूमिका निर्वाह गरेको छु र यहाँका जनताले पनि त्यही ठानेका छन् ।
यतिबेला पनि मान्छेले के बुझ्छन् भने माधव नेपाल नै हाम्रो जनप्रतिनिधि हो । ०७० देखि ०७४ सालसम्म यो क्षेत्रमा म सयौंपटक घुमेको छु, हजारौं मान्छेलाई भेटेको छु । थुप्रै कार्यक्रममा सहभागी भएको छु । बिहे, व्रतवन्ध, गुन्यूचोलीमा म पुगेको छु । मृत्यू संस्कारमा सहभागी भएको छु । निम्तो दिइएको ठाउँमा म पुगेको छु । मैले छोडेँ भन्ने कुरा वाहियात हो ।
तर, दुई क्षेत्रमा जितेपछि काठमाडौं २ लाई छाडेर रौतहट रोज्नुभएको त हो नि ?
मैले रोजेको होइन । हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौं । त्यतिबेला मधेस आन्दोलन चर्किरहेको थियो । त्यसो हुनाले मधेसमा मेरो बढी आवश्यकता छ भन्ने भयो । मेरो निजी हित त यही ठाउँमा बस्दा नै हुन्थ्यो, किनभने मेरो घरबार, व्यवहार सबै यहीँ छ । रहरले त्यहाँ गएको होइन म ।
अहिले नि ?
अहिले पनि अनेक विकल्प थिए । तर, यहाँका जनताको न्यानो माया, आग्रह चाहनाले गर्दा यस ठाउँप्रति विशेष अपनत्व वोधको कारणले गर्दा यो ठाउँमा फेरि जनताको उम्मेदवार भएर आएको छु । कुनै पनि संसदभन्दा बढी यस क्षेत्रमा जाने व्यक्ति मै हुँ ।
छोडेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइराला दुई ठाउँ उठ्दा एक ठाउँ किन छोड्नुहुन्थ्यो ? शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइरालाले किन छोड्नुभयो ? त्यसैले यो प्रश्नमा कुनै तुक छैन ।
संविधान संशोधन हुँदैन, कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँदैन
भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका छैनौं, हामी सहकार्यमा छौं
‘कांग्रेस खराब पार्टी हो, अरु दुई पार्टी झनै खराब छन्’
December 6, 2017 December 6, 2017 latestnews
December 6, 2017 latestnews